जानी राखौ लिंगलाई केही दिनमै लामो र मोटो बनाउने तरिका « Light Nepal
जानी राखौ लिंगलाई केही दिनमै लामो र मोटो बनाउने तरिका
लाइट नेपाल संसारमा लिङ्ग बढाउने कार्य निकै पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ। भारत वर्षका साधुहरूले लिङ्गमा विभिन्न भार झुन्डयाउने कार्यलाई पनि यसै रूपमा लिइएको छ। अहिलेका लिङ्ग बढाउने उपायलाई मोटामोटी रूपमा ४ प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ।
१. कसरत तथा हातैले तन्काउने विधि : दैनिक रूपमा पर्याप्त समय लिङ्ग(दोहन -दुहुने) जस्तो गरी तन्काइए लिङ्गको नाप बढ्ने दाबी गरिएको छ। यसरी हातैले तन्काउने विधि अरेबियाका भनिने चलनवाट आएको दाबी गरिन्छ। यस्तो लिङ्ग दोहनको विधिले भित्री तन्तुलाई फुक्न मद्दत गर्छ र लिङ्ग राम्रोसँग उत्तेजित हुने दाबी गरिन्छ। यसै भन्न नसकिए पनि रक्तसञ्चारलाई राम्रो बनाइ यसले लिङ्गको स्वस्थतालाई यथास्थितिमा राख्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा धेरैले विश्वास गर्छन्। यो विधि अपनाउँदा अत्यधिक दबाबका साथ तानिए तन्तुलाई चोट पुग्ने कुरामा पनि सचेत हुन आवश्यक हुन्छ।
२. तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि : कुनै वजनदार वस्तु लिङ्गमा झुन्डयाई वा Screw-extender भएका यन्त्रले लिङ्गको नाप बढाउने विधि हो। कतिपयले यस्ता विधिले अनावश्यक रूपमा लिङ्गमा चोटपुग्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
३. पम्प प्रयोग गर्ने विधि : दबाब कम गर्ने पम्प प्रयोग गरी लिङ्गमा रक्त प्रवाह बढाउने यो विधिले अन्य समयमा भन्दा लिङ्गको उत्तेजना कडा र बढी हुने दाबी गरिएको छ। यसलाई लिङ्गको फेदमा लगाएपछि हाते वा विद्युतीय भ्याकुम पम्पले हावा निकालिन्छ र कम दवाव भएको कारणले लिङ्गमा बढी रक्त प्रवाह हुन्छ र लिङ्ग बढी उत्तेजित भएजस्तो देखिन्छ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका वारेमा त प्रश्न छँदैछ, ठीकसँग प्रयोग गर्न नजाने लिङ्गमा चोट पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
४. शल्य चिकित्सा : लिङ्ग बढाउन विभिन्न किसिमको शल्यचिकित्सा पनि प्रयोगमा ल्याइन्छ। त्यस्तो विधिमा लिङ्गलाई अडयाउने तन्तु काट्ने एउटा तरिका हो जसले गर्दा वाहिरवाट हेर्दा लिङ्ग केही लामो भएको भान पर्छ। आफ्नै शरीरको अन्य भागवाट निकालिएको वोसो तन्तु भर्ने विधिले विशेषगरेर लिङ्गको मोटाइ बढाउन मद्दत गर्छ। छालालाई नै नचबात गर्ने पद्धतीको पनि विकास भएको छ। त्यसबाहेक लिङ्गमा अन्य वस्तु राख्ने -प्रत्यारोपण) जस्ता अनेक उपायको प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो शल्यक्रिया कुशल शल्य चिकित्सकवाट गरिनु आवश्यक छ। यसका बाबजुद कतिपय स्थितिमा शल्यक्रिया पछि आशाअनुरूप नतिजा नआएको पनि देखिन्छ, जसले असन्तोषलाई अझ थप्छ। कतिले शल्यक्रियाको जटिलतालाई सामना गर्नु परेको छ जसले उसलाई पुरानैभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा पुर्‍याएको छ। कतिले उत्तेजना नभएको लिङ्गको आकारमा सुधार भएको पाए पनि उत्तेजित लिङ्गको आकारमा सुधार नभएको वा यौन सुखमा सकारात्मक परिवर्तन नआएको कुरा पनि गरेका छन्। लिङ्ग केही सानै भए पनि आफूले यौन सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भने महिलासाथीलाई दिन पनि सकिन्छ। तपाईलाई थाहै होला, महिलाको सबैभन्दा यौन संवेदनशील अङ्ग अर्थात् भगांकुर बाहिरतिर नै हुन्छ। योनिको कुरा गर्दा पनि भित्रतिरको नभै बाहिरतिरको भाग यौन संवेदनशील हुन्छ।
अपडेट : यस्तो आयो भरतपुर महानगरको पछिल्लो मत परिणाम काठमाडौंको मेयरमा एमालेका बिधासुन्दर, उपमेयरमा काँग्रेसकी हरिप्रभा बिजयी बल्ल खुल्यो रहस्य : यसरी गाँसिएको थियो पोखराकी उममेयर र राष्ट्रपतिको मितिनी साइनो नेपालको शिर निहुराउने राष्ट्रिय लज्जाको बिषयलाई रविले अति दुखित हुदै यसरी बेजोडसंग उठाए (भिडियोसहित) आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७४ साल ज्येष्ठ १४ गते आईतबार तदानुसार इश्वी सन २०१७ मे २८ तारीख खेल पुरानै जिन्दगीको मैदान बदलिरहन्छ समय संगै मान्छेको पहिचान बदलिरहन्छ ‘गजल दरबारमार्गमा भेटिए सृष्टि र आयुष्मान यसरी…(हेर्नुस् भिडियो) राजनीतिमा होमिए खगेन्द्र लामिछाने…(भिडियो) भरतपुर बाट आयो भर्खरै मतपरिणामको ताजा अपडेट यस्तो छ नतिजा , उता एमाले उम्मेदवारमाथि कुटपिट निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउने हाम्रो टिम